दुरताको पीडा « नेपाली मुटु
« डा. बाबुराम भट्टराई चढेको गाडीमा शंकास्पद (?) ठक्कर
महराको अडियो प्रकरण : के हो वास्तविकता ?? »
आजको शनिबार बसिबियालोमा एक जना साथी ‘विकाश तिमल्सिना’को अनुभव लिएर आएको छु । कति जनालाई लाग्ला यो त सानो कुरा भयो । यति सानो कुरा त हाम्रो जीवनमा हरेक दिन नै घटिरहन्छ । तर साथी, जीवनमा ठुला कुराहरु पर्खिदा पर्खिदै हामी जीवनका साना कुराहरु बिर्षि पो रहेका छौ कि । जीवन भनेको वास्तवमा साना साना कुराहरुको मिश्रण नै त हो नि, होइन र ? सम्झनुहोस् त, सबै साथीहरुले काँचो आँप खाइरहदा आफ्नो हातमा पाकेको आँप परेको बेला हामी कति खुसी हुन्छौ । क्यारेम सित्तैमा खेल्दा पनि हामी जित्न कति कोशिश गरिरहेका हुन्छौ, र त्यो जीतले कति धेरै खुसी दिन्छ । साँझमा खाली चौरमा साथीहरुसँग गफिएर बस्नुको मज्जा अरु केहिमा पाइन्छ होला र ? यसैले जीवनका यी साना झिल्काहरु छोडेर ठुलो आगो खोज्न थाल्यौ भने जीवन बेस्वादिलो हुन्छ । साथीको यो यस्तै झिल्कोमा हामी पनि रमाउँन है । तपाईसँग भएका यस्ता अनुभव पनि पठाउँन अनुरोध गर्दछु । रचना र अनुभव nepaliheart1@gmail.com मा पठाए हुन्छ ।
This entry was posted on September 4, 2010 at 3:16 pm	and is filed under शनिबार बसिबियालो. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “दुरताको पीडा”
मैले कहि सुनेको थिए, साना साना झिल्काहरुले नै जिन्दगी रमाइलो बनाउँछ रे । यो जिन्दगीको झिल्को आन्दोलनमा तपाईलाई स्वागत छ । विकाशजी छोटो मिठो अनुभवको लागि धन्यवाद ।
सनम तामाङ्ग said
सबैलाई यस्तै हुदो रहेछ । म त मलाई मात्र हो कि भन्ठानेको
Rohan Dhimal said
nice Bikash ji…..keep it up………..itsahuman behavior…..
embee ghising said
dat happens2everybody n dis is life………..
………thanx fordlovely feelings……..